Addis Ababa oo “Geneva Convention 1951” ku Dhaqada Dadka Kilalka Lagu Dhibo! – Rasaasa News
Jijiga, July 4, 2014 – Ismaamulka Somalida Itobiya [ISI], oo muddo badan baahinayey baxsadka wasiirkii hore ee mashruuca waraabka dooxooyinka Cabdiwahaab, oo hada ka walaacsan ku soo noqoshadiisa Addis Ababa.
Wararka sheegaya baxsadka Cabdiwahaab Rashiid oo muddo ka dhex socday degaanka, waxay tibaaxi jireen in uu lunsaday malaaytiin lacag ah oo loogu talo galay barnaamijka dib u dajinta oo uu masuul ka ahaa. waxaa la sheegay in uu guryo iyo gaadiid badan uu ka iibsaday lacagtaas, kuna qoray ehelkiisa.
Eeda lagu buuxiyey iyo masuuliyadii uu hayey oo laga qaaday C/wahaab Rashiid, waxaa ku samato baxay masuuliyiinta ismaamulka oo loo haystay lunsasho lacago badan oo lagu lunsaday magaca mashruuca dib u dajinta.
C/wahaab, kolkii masuuliyada laga qaaday, wuxuu ku sugnaa Maraykanka oo uu iskii u tagay. Isaga oo Maraykanka jooga ayuu ogaaday in kiis musuq lagu buuxiyey, loona diyaarinayo xadhig si loogu qaan baxo. Waxaana soo baxday in uu iska dhiibay Minneapolis.
Intii xiligaas ka dambaysay, waxaa la waayey muuqa Cabdiwahaab Rashiid oo lagu qoray baxsad, waxaana laga tirtiray meelihii uu kaga jiray warbaahinta degaanka iyo kaalinkii waxqabad uu lahaa. Waxaa kale oo laga sameeyey qoraalo badan oo wax laggaga sheegayo sumcadiisa.
Hadaba, sida la sheegay Cabdiwahaab Rashiid, wuxuu maalin dhawayd ka soo dagay garoonka diyaaradaha Pole, Addis Abab, waxaana soo dhaweeyeen masuuliyiin u dhashay degaanka oo heer federal ah.
War hor dhaca ah oo ka soo duulay Addis Ababa, ayaa sheegay in Cabdiwahaab uu waxbarasho ugu maqnaa dalka Maraykanka.
Madaxda Ismaamulka Somalida, waxay caado ka dhigteen in ciday isqabtaanba si deg deg ah dambi loogu sameeyo, loogana saaro xayndaabka Kilalka. Si ayna xubnahaasi u helin fursad ay isku difaacaan. Arinkan wuxuu u horseeday masuuliyiinta Ismaamulka in ay ku nabadgalaan kursiga.
Aqoonyahano, xirfadleyaal iyo masuuliyiin waayo arag u ah shaqooyinka Ismaamulka Somalida, ayaa ku oodan Addis Ababa, ka dib kolkii dambiyo laggaga eedeeyey degaanka.
Cabdiwahaabna, waxaa uu ka mid noqonayaa aqoonyahanada ugu dambeeyey ee lafahooda kala baxsada Kilalka, ee nabadgalaya u doontay Addis Ababa. Waxaana hore ugu sugnaa; Faraxaan Xuseen, Dr. Suldaan Wali, Axmed-deeq Maxamed Cabdi, Aadan Faarax, Ismaaciil Sheekh Maxamed (Jabarti) iyo Dr. Axmad Sheekh Maxamed.
Hadaba, waxaa yaab leh, in la iswaydiiyana mudan, gudiga dabagalka musuqa ee federalku waxay u soo jeediyaan Kilalka eedo la xidhiidha musuq. Kolka ay kilalka ka baxsadaan dadka musuqa lagu riixo, kiiska way xidhaan. Kuwa musuqa lagu riixayna Addis Ababa, ayaa lagu soo dhaweeyaa. Tolow waa kuma dambiilaha la doonayaa?